Andro ho an’ny Sembana: mbola mahatsapa fanilikilihana ankolaka ireo eto Mahajanga | Région Boeny
Manampy ny olona manana ny fahasembanana hiala amin’ny fahantrana, fanabeazana mampiaty, asa mendrika, ary fahafahana mivezivezy no loha-hevitry ny andro manerantany ho an’ireo manana fahasembanana, izay nomarihina teto Mahajanga ny sabotsy 03 desambra 2016, teo anoloan’ny Lapan’ny tanàna.
Mbola misedra olana amin’ny fivezivezena eny amin’ny biraom-panjakana izahay, indrindra amin’ny fiakaran-tohatra hoy ny mpitondraten’ireo sembana eto Mahajanga. Toe-javatra izay tsapanay fa anisan’ny mbola endriky ny fanikilihana ankolaka mahazo anay izany hoy izy, toy izay miseho amin’ny firafitry ny birao eny amin’ny Prefektiora Mahabibo sy ny eny amin’ny Bloc administratif, Ampisikina, izay misy rihana telo sy dimy.
Diabe namakivaky ny tanàna nandraisan’ireo sembana anjara niaraka tamin’ireo manampahefana sy lehiben’ny sampandraharaha niainga teny amin’ny zaridaina Caylla Mahabibo, varotra fampiratiana ny asa-tànan’ireo sembana, ary fifaninana fanatanjahantena nifanovan’izy ireo ihany. Ireo no nentina nanamarihana ity andro ity teto Mahajanga.
Tsy vesatra amin’ny fiaraha-monina ny fahasembanana ary afaka mandray anjara amin’ny asa rehetra sy ny fampandrosoana ny faritra hoy Rtoa Talen’ny Sampandraharaham-paritry ny Mponina eto Boeny. Nefa mbola mahatsikaritra izahay hoy izy fa mbola menatra ny fianakaviana sasany manana sembana ary manitrika azy ireny.
Manoloana ny toe-tsainy toy izany dia nanentana izy fa, tsy tokony hisalasala ireo izay mahita tranga manjo ireo tra-pahasembanana mba hitoroka ny zava-misy eny anivon’ny Sampandraharaham-paritry ny Mponina sy ny Komisionim-pirenena mahaleotena momba ny Zon’olombelona na ny CNIDH (Commission nationale Indépendante des Droits de l’homme) izay samy mpiahy sy mpiaro ny olona manana fahasembanana sy ny zon’olombelona.
Manao ezaka ny Faritra hanamorana ny filan’ireo sembana nefa mahatsapa fa mbola tsy ampy izany hoy ny Talen’ny Kabinetrany, Atoa Hemedy. Miantso fandraisana anjaran’ny rehetra izahay hifanohana amin’ireo sembana mba afahan’izy ireo mizaka ny zo maha olona azy.
Ny Kaominin’i Mahajanga kosa izay efa nanao ezaka nametraka ireo rafitra sasany hanamorana ny fivezivezen’ireo sembana, dia mbola manatanteraka ny tolo-tànana tsy miato ho fanampiana ireo olo-marefo ireo ka efa mahatratra 1 400 800 Ariary izany ankehitriny.